Inona no atao hoe CMP? | Martech Zone fanafohezan-teny
Martech Zone » fanafohezan-teny » Fanafohezana manomboka amin'ny C	» VIT
CMP no fanafohezana ny Sehatra fitantanana ny fanekena.
Fitaovana iray miantoka ny fankatoavan'ny orinasa ny fitsipika momba ny faneken'ny fifandraisana, toy ny GDPR sy TCPA. Ny CMP dia fitaovana azon'ny orinasa na mpamoaka ampiasaina hanangonana ny faneken'ny mpanjifa. Manampy amin'ny fitantanana ny angon-drakitra sy fizarana izany amin'ny mpanome tolotra lahatsoratra sy mailaka.